Pro Evolution Soccer 2018: Android တွင်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည် Androidsis
Pro Evolution Soccer 2018 ကို Android အတွက်ရရှိပြီဖြစ်သည်
Pro Evolution Soccer သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဘောလုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်လိုပဲ ဖီဖာနှစ်စဉ်ဂိမ်းအသစ်ထုတ်ဝေသည်။ နှစ်စဉ်သူတို့သည်အရောင်းရဆုံးအရောင်းရဆုံးသူများဖြစ်လေ့ရှိပြီးအထူးသဖြင့်ခရစ္စမတ်ရာသီတွင်ဖြစ်သည်။ ဂိမ်းနှစ်ခုလုံးကို console တွေအတွက်ရနိုင်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြသည် Android သို့ PES 2018 ရောက်ရှိလာခြင်း.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီပြီးသားဖြစ်ခဲ့သည်။ Pro Evolution Soccer 2018 ကို Android ဖုန်းများအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ ထုတ်ဝေမှုအသစ်တစ်ခုစီကဲ့သို့သတင်းကိုတင်သည်။ အင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်ဂိမ်းကို၎င်းတွင်လည်းအောင်မြင်စေလိုသောအခြားအပြောင်းအလဲများ Android ဗားရှင်း.
စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ Pro Evolution Soccer 2018 ပေါ်ပေါက်လာပုံ Android ဖုန်းများအတွက်။ Konami, ဂိမ်းဖန်တီးသောစတူဒီယို, ဤကိစ်စတှငျထူးခြားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ဗားရှင်းအသစ်ကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်မထုတ်ဘဲအခြားလမ်းကြောင်းရွေးချယ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ လက်ရှိ PES 2017 ဗားရှင်းကိုအသစ်နှင့်အသစ်ပြောင်းပါ.
သောကြောင့် သူတို့ကနာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီ။ Konami မှထူးခြားသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ပြreportedနာမရှိဘူးလို့ထင်ရပေမယ့်၊ အဘို့အပေမယ့် PES 2017 အသုံးပြုသူများ ဒါကြောင့်အတန်ငယ်နှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုဤမွမ်းမံမှုနည်းလမ်းအပေါ်မှတ်ချက်ပေးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောချို့ယွင်းချက်ဖြစ်သည်။
Pro ကို Evolution ဘောလုံး 2018 သတင်းနှင့်အတူတင်ဆောင်ရောက်ရှိလာသည်။ သူတို့မှာရှိတယ် updated ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှုနှင့်မြန်နှုန်းတိုးတက်မှုများနှင့်အတူ ထိန်းချုပ်မှုယခင်မျိုးဆက်ကဲ့သို့တူညီသောရှိနေဆဲပေမယ့်။ သူတို့ကသူတို့ကိုနည်းနည်းစုံလင်ပြီ အရမ်း အသစ်က Modes သာမိတ်ဆက်ပေးသည်ဒီ PES 2018 ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင်လုပ်ဖို့။ သူတို့တွင်တစ် ဦး အွန်လိုင်း multiplayer mode.
Konami သူလည်းသူကမှတ်ချက်ချထားပါတယ် ဂရပ်ဖစ်မှတိုးတက်မှုစေပြီ ဂိမ်း၏။ Pro ကို Evolution ဘောလုံး 2018 ယခုရရှိနိုင်ပါသည် Android မှာအခမဲ့ download လုပ်ပါ။ ဒေါင်းလုပ်သည်အခမဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင်တွေ့ရှိနိုင်သည် In- ဂိမ်းဝယ်ယူမှု။ အချို့ပစ္စည်းများအတွက်ယူရို ၁.၀၉ မှယူရို ၁၀၉.၉၉ အထိပေးချေမှုများ။ Android ပေါ်ရှိလူကြိုက်များသောဘောလုံးဂိမ်းရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်သနည်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Pro Evolution Soccer 2018 ကို Android အတွက်ရရှိပြီဖြစ်သည်
NichePhone-S: Android ဖုန်းကခရက်ဒစ်ကဒ်အရွယ်အစား
SM-W2018, Samsung ၏နောက်ထပ်ခေါက်သိမ်းထားသောဖုန်း၏ပုံရိပ်အသစ်များပေါက်ကြားခဲ့သည်